Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Abdul Wali
Abdul Wali waa hoggaamiyaha kooxda Jamaat ul-Ahrar (JuA), waa urur xagjir ah oo xiriir la leh Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Waxaa la soo wariyay inuu ka howlgalo gudaha Gobollada Nangarhar iyo Kunar ee Afghanistan.
Inta Wali uu hoggaaminayay, JuA wuxuu ahaa mid ka mid ah shabakada TTP ee howlaha ugu firfircoon ka wada Gobolka Punjab oo waxay sheegteen bambo qarax oo isbiimeys ah iyo weerarro kale oo ka dhacay dhammaan wadanka Pakistan.
Bishii Maarso 2016, JuA waxay fuliyeen qarax bambaano oo isbiimeys ah oo ay ka fuliyeen beer darjiin dadwayne oo ku taala Lahore, Pakistan halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 75 qof oo ayna ku dhaawacmeen ilaa iyo 340 qof.
Bishii Agoosto 2015, JuA waxay mas’uuliyaddeedu ay sheegatay bambaano isbiimeys ah oo ka dhacay gudaha Punjab kaas oo uu ku dhintay Wasiirka Guryaha ee Punjab Shuja Khanzada iyo 18 oo ka mid ah taageerayaashiisa.
Wali waxaa sidoo kale loo yaqaanay Omar Khalid Khorasani. Wuxuu ku dhashay Mohmand Agency, Pakistan oo waxaa la rumaysan yahay inuu jiro soddomeeyo. Wuxuu horey uu u ahaan jiray wariye iyo gabayaa oo wuxuu soo dhigtay dhowr dugsi oo Karachi ku dhexyaala.
Naanays: Omar Khalid Khorasani
Kooxda Argagaxiso: Jamaat-ul-Ahrar, Tehrik-e-Taliban Pakistan
Wasaarada Arimaha Dibadda FTO: 1da Sitembar, 2010
Wasaarada Arimaha Dibadda SDGT: 1da Sitembar, 2010